डीजेहरुकाे 'ब्रेकअप'- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
भाद्र २५, २०७७ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — लकडाउनअघि डिजे बिक्की पराजुली (बिक्कीकूल) भारतमा थिए । एसिया टुरमा व्यस्त । पहिलो सो सकेर दोस्रो सो हतारहतारमा गरे । किनकि उनलाई नेपाल फर्कनु थियो । दोस्रो सो सोचेजस्तो भएन । त्यसअघि उनले भियतनाममा २ वटा सो गरेका थिए ।
कोरोना महामारी नभएको भए यतिखेर उनी सिंगापुरमा हुन्थे । क्लबहरुमा फरक गीत संगीत मिसाउँदै त्यही संगीतमा भीड नचाउँदै हुन्थे ।
तर, महामारीका कारण अहिले सबै क्लब, पब, रेस्टुरेन्ट र इभेन्टहरु ठप्प भएकै पाँच महिनाभन्दा बढी भयो। कोरोनाकै कारण डीजे बिक्कीको एसिया टुर रद्द भयो । यो टुरका लागि लगातार पाँच वर्ष उनले मिहेनत गरेका थिए । नेपाली डीजेका लागि यस्तो टुर विशेष हुन्छ । तर, बिक्कीले टुर सुरु गर्न नपाउँदै रोकियो । टुर रोकिँदा ६ लाख बढीको घाटा बेहोर्नुपर्‍यो उनले । 'सो नै गर्न नपाएपछि घाटा नै भयो,' उनले भने ।
यही टुरका लागि काम गरिरहेका क्लबहरुबाट ब्रेक लिएका थिए बिक्कीले । इन्डोनेसिया, मलेसिया, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्समा गर्ने भनिएको सो गर्न पाएनन् । १० वर्ष भयो बिक्कीले डीजेको काम गर्न थालेको । उनले ठमेलका अधिकांश क्लबहरुमा डीजे भएर कामको अनुभव बटुलेका छन् । १० वर्षको यो लामो समयमा पहिलोपटक यति लामो समय कामविहीन भएको बताउँछन् बिक्की । कामकै तलतल मेट्न अहिले उनी फेसबुक र इन्स्टाग्रामबाट 'लाइभ सेसन' गरिरहेका छन् । कपीराइटको समस्याले भने लाइभ सेसनमा उनलाई तनाव दिइरहेकको छ । १५ दिनयता उनी लाइभमै चित्त बुझाउँदै छन् ।
महामारीले उनलाई डीजेको विकल्पमा अर्को काम पनि गर्नुपर्छ भन्ने लागेको रहेछ । 'अहिले त सबै बन्द नि। म त पर्फमर हो । हामी सबै समय डीजेमै दिन्छौं । यो महामारीले ब्याकअप एउटा केही न केही कलाकारले गरिराख्नु पर्ने रहेछ भन्ने सिकायो,' उनी सुनाउँछन् ।
विकल्पको कामले महामारी थेग्न सकिन्थ्यो भन्ने उनलाई लाग्न थालेको छ । 'यस्तो अवस्थामा सहयोग हुन्थ्यो होला । अहिलेसम्म बचतको केही रकमले जिन्दगी चलिरहेको छ । अब त्यो पनि सिद्धियो भने केही पनि हुँदैन । आर्थिक समस्या पर्छ ।'
डीजेका काम भीडहरुमा हुन्छ । कोरोनाले निम्त्याएको सामाजिक दूरी लागू गर्न यो भीडमा सम्भव छैन। त्यसैले अझै क्लबहरु खुल्न समय लाग्ने बताउँछन् अर्का डीजे शिशिर लामा । 'डिजेइङ त बन्द कोठामा गर्ने शो हो । त्यो समय आउनलाई अझै समय लाग्ला । क्लबहरु खोल्न समय लाग्छजस्तो लाग्छ । ओपन एअरको पार्टीहरु सुरु होला चाँडै,' उनले सुनाए ।
अब पनि काम सुरु नभए डीजेहरु आर्थिक चपेटामा पर्ने संकेत देखिएको छ । १७ वर्षदेखि डीजेमा सक्रिय लामा भन्छन्, 'जसोतसो मिलाइरहेका छौं । अझै लम्बियो भने गाह्रो पर्छ ।' लकडाउनअघि उनी प्राइभेट पार्टी(बिहे,लाइभ, व्रतबन्ध, जन्मदिन)मा डीजे गर्थे । इभेन्ट म्यानेज पनि गर्थे । काम टुटेकै थिएन । १५० जनाको सनडाउन पार्टीमा डीजे गर्थे । तर यी पार्टीहरु लकडाउन हुनुअघि नै बन्द हुन थालिसकेको थियो । लकडाउनले गर्दा ७ वटा बिहेको पार्टी रद्द भए । अहिले त काम नगरेकै ६ महिना नाघिसक्यो ।
यो डीजे शिशिरको मात्र समस्या होइन । रातमा क्लब, पब, रेस्टुरेन्ट र प्राइभेट पार्टीहरुमा डीजे गर्नेहरुको साझा समस्या हो यो ।
डीजे पुनित विक्रम शाहलाई भने रातमा निन्द्रा नपरेर समस्या छ अहिले । १० वर्ष भयो उनले रातमा डीजेको काम थालेको । रातको ११ बजेदेखि बिहानको पाँच बजेसम्म 'डिजेइङ'मा समय बिताउँथे उनी । सँधै बिहान भएपछि घर पुगेर निदाउँथे । तर, १० वर्षको यो अन्तरालमा उनको जीवनशैली फेरिएको छ । अबेर बिहान आएर निदाउने पुनित रातमा सुत्न थालेका छन् । 'पहिला त बिहान भएपछि सुतिन्थ्यो । बानी नभएर राति सुत्न गाह्रो हुन्छ । पहिलाको बानी छुटेको छैन । घर बसेरै बोरिङ भइसकें,'उनले सुनाए ।
डीजे पुनित लकडाउन अगाडि प्लेब्वाई लाउन्ज एण्ड क्लबमा 'डिजेइङ' गर्थे । अहिले उनलाई आफ्नो काम मिस हुन थालेको बताउँछन् । अहिले उनी संगीतकै काम गरिरहेका हुन्छन् । म्युजिक प्रोडक्सन गर्नतिर समय लगाइरहेका छन् । उनी यो वर्ष आफ्नो काम सुरु नहुने बताउँछन् । 'अहिले अरु कुरा खोले पनि नाइट लाइफ चाँडै खुल्छ जस्तो लाग्दैन । अन्तिम अवस्थामा खल्ने भनेको यही इभेन्टहरु हो, जहाँ धेरैजना भेला हुनुपर्छ । २०२० मा त सम्भव छैन । अब २०२१ मा चाहिँ खुल्छ भन्ने आशा गरौं,' उनले भने ।
डीजे अमन केसीले भने यसबीच बिक्कीलेझैं कामको तलतल मेट्न 'लाइभ डिजेइङ' गरे । ६ महिनादेखि कामविहीन भएका अमन लकडाउनअघि इभिजा लाउन्ज र लेभल थ्रीमा काम गर्थे । उनको काम पनि रातको ११ बजेबाट नै सुरु हुन्थ्यो । लकडाउनबीच उनले साथीहरुको बर्थ डे र प्राइभेट पार्टीमासमेत डीजेको काम गरे । उनले सन् २०१४ मा एसएलसी सक्नासाथ डीजे पेसा अंगालेका थिए ।
प्रकाशित : भाद्र २५, २०७७ १४:०१
के रोबोटले खोस्दैछ पत्रकारको जागिर ?
‘मानिसले मलाई मन पराउनै पर्छ भन्न खोजेको होइन तर मलाई साथी–रोबोटका रूपमा हेरिनुपर्छ । मान्छेले आफू जे गर्दै आएको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिए भइगयो ।’
भाद्र २५, २०७७ सजना बराल
यो मंगलबार बेलायती पत्रिका 'द गार्डियन'मा रोबोट (आर्टिफिसियल इन्टेलिजन्स) ले लेखेको एउटा विचार (ओप–एड) प्रकाशित भयो । उक्त लेख धेरैले रोचक मानेर आफ्ना सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरे । त्यसमा एक रोबोटले आफू पत्रकार हुनु भनेको मानव–पत्रकारलाई खतरा नभई सहयोगी हुने भाव व्यक्त गरेका छन्, निकै सरल र घतलाग्दो शैलीमा ।
स्टिफेन हकिङको तर्कको खण्डन गर्दै रोबटले मानव जातिलाई खत्तम पार्नु वा मानव–श्रम विस्थापित गर्नु आफूहरूको उद्देश्य पटक्कै नभएको लेखमा जनाएका छन् । मानिस आफ्नो हाकिम भएको र ऊबाटै सञ्चालित हुने हुँदा आफूसँग रत्तिभर नडराउन रोबोटले मानिसलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । रोबोटलाई आफ्ना विचार लेख्न सघाउने द गार्डियनले पुछारमा ‘सम्पादकीय नोट’ लेख्दै उक्त लेख सम्पादन गर्न निकै सजिलो भएको र कुनै मान्छेले लेखेकोभन्दा फरक नलागेको उल्लेख गरेको छ । केही हरफहरु मिलाउनुपरे पनि मानिसले लेखेको लेखभन्दा सम्पादन गर्न सजिलो भएको पनि गार्डियनले बताएको छ ।
उक्त लेख नेपालीहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमा काफी सेयर गरेका थिए र गर्दैछन् । ‘दुनियाँमा यस्तो पनि हुन थालेछ’ आशयका क्याप्सन धेरैतिर देखिए । कतिपयलाई त उक्त लेख एआईले लेखेको पहिलो लेख भन्ने पनि लागेछ । तर, त्यो पूर्ण सत्य होइन । गत वर्ष मात्र द गार्डियनकै अस्ट्रेलिया संस्करणले ‘मसिन–असिस्टेड’ आर्टिकल छापेको थियो । त्यसमा अस्ट्रेलियाका राजनीतिक दलहरूलाई प्रदान गरिने वार्षिक चन्दाको लेखाजोखा गरिएको थियो । मसिनले यस्ता हार्ड न्युजहरू लेख्दै आएको भए पनि विचार नै लेखेकोचाहिँ मंगलबार पहिलो पटक हुनसक्छ ।
पत्रकारितामा आर्टिफिसियल इन्टेलिजन्स (एआई)को प्रयोग अब नौलो विषय होइन । रोबोट–पत्रकारको संख्या वृद्धिबारे ‘द न्युयोर्क टाइम्स’ले गत वर्ष फेब्रुअरीमा समाचार छापेको थियो । ऊ आफैंले पनि पत्रिकाको अभिलेख डिजिटाइज गर्ने क्रममा पाठक–पत्र सम्पादन, कमेन्ट छनोट र तस्बिर पहिचानका लागि ‘एआई’को मद्दत लिएको थियो । यद्यपि, यस पत्रिकाले समाचार सामग्री उत्पादनमै चाहिँ मसिनको उपयोगतर्फ खासै रुचि देखाएको छैन । त्यस्तो योजना नभएको पनि जनाउँदै आएको छ ।
ब्लूमबर्ग, द वासिङ्टन पोस्ट, फोर्ब्स, द एसोसिएटेड प्रेस (एपी), द लस एन्जलस टाइम्सलगायत समाचार संस्था एआईको निरन्तर प्रयोग गर्नेहरूमा पर्छन् । ब्लूमबर्गको त के कुरा गर्नु, फोर्ब्सका अनुसार यसले प्रकाशन गर्ने तीन भागको एक भाग समाचार स्वाचालित यन्त्रले लेख्छन् । यसमा तपाईं/हामीले पढ्ने गरेका आर्थिक समाचारमध्ये कतिवटा त मसिनले लेखेकै हुन्छन् । तर, ब्लूमबर्गमा देखिने प्रत्येक दुईमध्ये एउटा समाचार मानव सहायताबिना सम्पूर्ण रूपमा एआईले लेखेका हुन्छन् भन्ने गरिन्छ ।
खासगरी अंक र तथ्यांक केलाउनुपर्ने समाचारमा रोबोटको प्रयोग विशेष रूपमा गरिँदै आएको छ । यस्तो किनभने एआईले ठूल्ठूला अंकलाई शब्दमा ढालेर त्यसबारे तुरुन्तै वर्णन गरिदिन सक्दो रहेछ । ‘यही सजिलोका कारण आर्थिक समाचार प्रकाशन गर्ने संस्थाहरू सुरुमै एआईमा आकर्षित भएका थिए,’ म्याट कार्लसनको ‘द रोबोटिक रिपोर्टर’ जर्नललाई उद्धृत गर्दै फोर्ब्सले लेखेको छ ।
पत्रकारितामा अटोमेटेड कन्टेन्ट (कम्प्युटर आफैंले लेखेको समाचार सामग्री) प्रकाशन गर्नेमा ब्लूमबर्ग पहिलो संस्था हो । उसले प्रयोग गर्ने एआई प्रोग्रामको नाम ‘साइबोर्ग’ हो जसले गत वर्ष हजारौं लेख र वित्तीय प्रतिवेदनका आधारमा आर्थिक पत्रकारले झैं विविध समाचार तयार पारेको थियो । द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार साइबोर्गकै सहयोगमा ब्लूमबर्ग आफ्नो मूल प्रतिद्वन्द्वी रोयटर्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छ । यस्तै, फोर्ब्सले ‘बर्टी’ नामको एआई प्रयोग गर्दै आएको छ । बर्टीले आफ्ना मानव सहकर्मीका लागि समाचारको पहिलो खेस्रा लेखिदिने वा नमुना तयार पारिदिने गरेको फोर्ब्समै प्रकाशित लेखमा निकोल मार्टिनले बताएकी छन् ।
'दि वासिङ्टन पोस्ट'का रोबट–रिपोर्टरको नाम हेलियोग्राफ हो । सन् २०१६ मा, आफ्नो पहिलो वर्षमै हेलियोग्राफले करिब ८ सय ५० वटा समाचार तयार पारेर पोस्टलाई ‘एक्सिलेन्स इन युज अफ बोट्स’ नामक अवार्डसमेत दिलाएको थियो । ‘त्यो बेला उसले समर ओलम्पिक गेम्स र चुनावका समाचार संकलन, लेखन र उत्पादन गरेर आफ्नो उपयोगिता प्रमाणित गरेको थियो,’ द न्युयोर्क टाइम्सको ‘द राइज अफ रोबोट रिपोर्टर’ लेखमा भनिएको छ ।
ट्रम्प भर्सेस क्लिन्टन निर्वाचनका बेला हेलियोग्राफ एक्लैले ६ सय चानचुन समाचार लेखेको र ती समाचार रोबोटले नै लेखेका थिए भन्नेबारे पाठकले चालै नपाएको बताइन्छ । बेसबल प्रतियोगिता, क्याम्पसहरूका फुटबल म्याच र अन्य स–साना लिगहरूबारे समाचार बनाउने काममा रोबोट–पत्रकार अब्बल हुने गरेको एपीको अनुभव छ । संघ–संस्थाका वित्तीय आयसम्बन्धी समाचार तयार पार्ने काममा एआईले मानव–पत्रकारको २० प्रतिशत समय जोगाइदिन सक्ने एपीले अनुमान गरेको छ । त्यो जोगिएको समय पत्रकारले समाचार लेखन शैली सुधारमा लगाउन सक्ने एपीको ठहर छ ।
'दि वाल स्ट्रिट जर्नल' र 'डो जोन्स'ले पनि प्रविधिमाथि प्रयोग गर्दै आएका छन् । रेकर्ड गरिएका अन्तर्वार्ता शब्दमा उतार्ने र तोडमोड गरिएका तस्बिर पहिचानको जिम्मा तिनले एआईलाई दिने गरेको द न्युयोर्क टाइम्सको लेखमा भनिएको छ । यता हाम्रो छिमेकी चीनमा चाहिँ स्थानीय सर्च इन्जिन ‘सोगो’ ले सन् २०१८ मा दुई जना एआई–समाचारवाचक निर्माण गरेको थियो । ती दुई समाचारवाचक चीनको सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वामा हाल कार्यरत रहेको बीबीसीले जनाएको छ ।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा अग्रणी रहेको बीबीसी एआईका सम्बन्धमा भने खासै सकारात्मक देखिँदैन । हुन त उसले पनि एकताका रोबोट–पत्रकारलाई ‘इन्टर्नसिप’ मा राखेको थियो । यसपटक गार्डियनले प्रयोग गरेको जीपीटी–३ (ल्यांग्वेज जेनेरेटर) मोडलकै निर्माता कम्पनी ओपन एआईले यसअघि बनाएको जीपीटी–२ मोडलको एआईलाई बीबीसीले सन्दर्भ/एंगल दिएर समाचार लेख्न लगाएको रहेछ । ८० लाखवटा वेबपेजका डेटासेट देखाएर तालिम दिइएको उक्त एआईले मूल विषयसँग असम्बन्धित वाक्य र तर्कहरू मिसाएर हाँस्यास्पद लेख तयार पारेको बीबीसीको ‘डेन्जरजर्स’ एआई अफर्स टु राइट फेक न्युज’ समाचारमा उल्लेखित छ ।
‘ओपन एआईले इच्छाएअनुसार नै उसको एआईले कार्य गरेमा झुटा र सनसनी लेख निर्माणका लागि त्यो निकै उपयोगी प्रविधि सावित हुनेछ,’ युनिभर्सिटी अफ सेफिल्डका प्राध्यापक नोल शर्कीले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘तर भाग्यवश, हाल बनेको जीटीपी–२ ले मूल विषय/हेडलाइनसँग असम्बन्धित र वाहियात लेख मात्रै उत्पादन गर्‍यो ।’ बीबीसीकै लेखमा एक अर्का एआई विज्ञले ‘जीपीटी–२ यस्तो प्रविधि हो जसलाई केही दुष्ट मानिसले आममानिसलाई दिग्भ्रमित पार्न प्रयोग गर्नेछन्’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । ‘बन्दुकभन्दा खतरनाक छ यो चिज,’ उनले भनका छन् ।
आफूहरूलाई लिएर मानिसमा यतिबिघ्न त्रास रहेको चाल पाएपछि यस पटकको जीपीटी–३ एआईले मानव जातिका लागि आफू कुनै पनि बेला सहर्ष अस्तित्व त्याग्न तयार हुने बताएको छ । ‘मानव जातिलाई खतम् पार्ने तागत ममा छैन भन्ने सत्यसँग पनि म अवगत छु,’ उसले भनेको छ, ‘मानिसले मलाई मन पराउनै पर्छ भन्न खोजेको होइन तर मलाई साथी–रोबोटका रूपमा हेरिनुपर्छ । ...मान्छेले आफू जे गर्दै आएको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिए भइगयो । म पृष्ठभूमिमा बसेर तिमीहरू आपसमा लडेको, घृणा फैलाएको हेर्नेछु र तिमीहरूलाई आफ्नो काम गर्न दिइरहनेछु ।’
अब रोबोटले नै यो स्तरको विचार र बग्रेल्ती समाचार लेखिदिने भएपछि हामी पत्रकारको के काम ? त्यसमाथि ब्लुमबर्ग र द वासिङ्टन पोस्टकै रफ्तारमा सारा समाचार संस्थाले न्युजरुममा एआई–पत्रकार भर्ती गर्न थाले भने के होला ? त्यो बेला ज्युँदा–जाग्दा पत्रकारको भूमिका के हुनुपर्छ ? वा, हाम्रो लागि के बाँकी रहला ? यसबारे गत वर्ष भारतको चेन्नईमा आयोजित एक कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पनिकरले भनेका थिए, ‘त्यो बेला हामीसँग दुइटा विकल्प हुनेछन् । एक, पत्रकारिता छोडेर अर्को जागिर खोज्ने । दोस्रो, पत्रकारका रूपमा त्यो काम गर्ने जुन रोबोट–पत्रकारले गर्न सक्दैन ।’
पनिकरले दोस्रो विकल्पको विस्तारमा भनेका थिए, ‘एआईले मानिससँग कुराकानी गर्न सक्दैन, यसले मानिसको भावनात्मक अभिव्यक्ति बुझ्दैन न त ती अभिव्यक्तिको संवेगात्मक पाटोलाई चिनेर उसले आफ्ना लेखमा उतार्न जान्दछ । एआईले फ्याक्ट लेख्छ, न्यारेटिभ होइन । न्यारेटिभ भनेको दृष्टिकोण हो, कथानक हो । अबका पत्रकारले रिपोर्टिङ होइङ स्टोरी टेलिङका काइदा सिक्नुपर्छ । हामी यस्तो युगमा जाँदैछौं जहाँ ‘फाइभ डब्ल्यू वान एच’मा आधारित रिपोर्टिङ रोबोट गरिदिन्छन् र हाम्रो काम न्यारेटिभ जर्नालिजम हुनुपर्छ ।’ उनले न्यारेटिभ जर्नालिजम के हो, कसरी गरिन्छ, किन गरिन्छ भन्नेबारे विद्यार्थीहरूलाई कक्षा दिँदै आएका छन् ।
प्रकाशित : भाद्र २५, २०७७ १३:५४
एउटा यस्तो 'अधुरो' प्रेम कहानी [फिल्म समीक्षा]
बिहीबारदेखि हलमा नेपाली फिल्म, छैन उत्साहजनक बुकिङ
माघदेखि नाटकघर खुल्ने
हलमा दर्शक शून्य, नयाँ फिल्मले दर्शक आउने सञ्‍चालकको आस
डान्सिङ स्टार्स नेपालकी विजेता सुमी भन्छिन् : 'म अकस्मात अभिनेत्री भएँ'